Tiro 50,000 ku dhow ayaa gudaha Mali ku barakacay, xaaladoodana waa laga deyrinayaa - BBC News Somali
Tiro 50,000 ku dhow ayaa gudaha Mali ku barakacay, xaaladoodana waa laga deyrinayaa
Xigashada Sawirka, NRC
50,000 oo qof ku dhawaad ayaa ku barkacay gudaha Mali
Ku dhawaad 50,000 oo ruux ayaa guryahooda ka barakacay waqooyiga iyo bartamaha dalka Mali, sannadkan gudihiisa oo kaliya, sababo la xiriira dagaallada sokeeye, kororka kooxaha hubeysan iyo howlgallada milatariga.
"Gargaarka bani'aadanimo ayaa ku filnaan waayay baahida jirta waxayna dadku ku xaniban yihiin iyagoo aan heysanin adeegyada lagama maarmaanka ah" sidaas waxaa tiri hay'adda u dhaqdhaqaaqda gargaarka qaxootiga ee NRC.
Tirada cusub ee dadka barakacay waxay boqolkiiba 60 ka badan tahay marka la barbar dhigo tii la soo bandhigay sannadkii la soo dhaafay ee ay diiwaan galisay hay'adda NRC oo kaashaneysay hay'ado kale oo ka howl gala Mali.
"Saameyn aad u ballaaran waxay ka dhalatay howlgallada milatariga, iyadoo kumannaan qof ay guryohooda ka bara kaceenna ma jirto wax ay heystaan oo noloshooda kaafiya," ayuu yiri Hassane Hamadou, oo ah dhakhtar ka tirsan NRC oo ku sugan Mali.
Macaluul soo wajahday woqooyiga Nigeria
Bankiga adduunka oo gargaar ugu deeqaya qaaradda Afrika
Qiyaastii 5.2 milyan oo ruux ayaa gargaar bani'aadanimo u baahan sannadkaan.
Baahidu waxay aad uga badan tahay heerarkii ay gaari jirtay tan iyo markii ay xasaradaha billowdeen sannadkii 2012-kii, sida ay sheegtay hay'adda arrimaha bani'aadanimada u qaabilsan Qaramada Midoobay ee OCHA.
Ilaa iyo hadda, gargaarka Qaramada Midoobay ay ugu tala gashay Mali ayaa gaaraya boqolkiiba 32, halka tirada dadka caawinta u baahanna ay sii kordheyso.
Maadaama ay soo baxday baahi lama filaan ah oo ay sabab u tahay barakaca, ayaa dadka uu culeyska dheeriga ah soo food saaray ee waqooyiga iyo bartamaha Mali, hay'adda NRC waxaa ka tan batay culayska, waxaana la sheegayaa in aysanawoodi doonin laga billaabo bishan iney wax u qabato dhammaan dadka ku dhibaateysan Mali.
"Ma jiro wax nooga xanuun badan annaga, haddaan nahay shaqaalaha gargaarka bani'aadanimo, inaan aragno dad shacab ah oo dhibaateysan haddana aynaan waxba u qaban kari," Hamadou ayaa hadalkiisa sii raaciyay.
Qalalaasaha iyo holwgallada milatari ee ka socda Mali ayaa uga sii daray xaaladda xun ee ay ay ku jireen dadka markii horeba la dhibaatoonayay faqriga, cunto la'aanta iyo cimilada xumaatay.
"Qalalaasahan ma aha wax aan dalbannay, qeyb kama nihin dhinacyada is heysta, sidaasoo ay tahayna waxaan nahay dhibaneyaasha ugu horreeya ee ay saameynayaan," ayay tiri haweeney ka mid ah dadka ka bara kacay magaalada Mopti. "Waxaa la igu kallifay inaan la cararo afar carruur ah oo aan dhalay oo aan howdka isku qarinno muddo saddex maalmood ah annagoo aan heysanin raashin iyo biyo toona, ka dibna waxaa noo suurta gashay inaan u soo martino waalidkey" ayay tiri.
Sannadkan gudihiisa, hay'adda NRC ayaa gargaar caawinaad ah siisay in ka badan 40,000 oo ruux oo ku sugnaa inta badan deegaannada ay saameynta gaartay ee magaalooyinka Mopti, Timbuktu iyo Menaka.
Hay'addaan ayaa dhaqaalaha ay ku taageertay dadkaas ka heshay hay'adda Midowga yurub u qaabilsan arrimaha bani'aadanimada, dowladda Norway iyo hay'adda UNICEF, waxaana ay caawinaad dhinaca farsamada ah ka heshay hay'ado kale oo ay iskaashi la leedahay.